बाबुरामको घरमा सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग ! - Everest Dainik - News from Nepal
२०७७, २१ असार आईतवार
काठमाडौंः पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईको घरमा सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग भएको पाइएको छ ।
सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई छोरीको कपाल काट्न लगाएर भट्टराईको दुरुपयोग गरेका हुन् ।
आइतबार भट्टराई श्रीमती हिसिला यमीले आफ्नै छोरी मानुषी यमी भट्टराईको कपाल सशस्त्र प्रहरी बलका जवानले काट्दै गरेको फोटो आफ्नो फेसबुक वालमा पोस्ट गरेकी छन् । आलोचनापछि उक्त पोष्ट हटाइएको छ ।
याे पनि पढ्नुस धमाधम सांसद पक्राउ पर्नु लोकतन्त्रको उपलब्धिः डा. भट्टराई
उनले फोटो पोस्ट गर्दै लेखेकी छन्, ‘मानुषीको कपाल एपीएफ भाइले काट्दै, जेकेन्द्र कपाल कटाइको निगरानी गर्दै ।’
ट्याग्स: डा. बाबुराम भट्टराई, सुरक्षाकर्मी